KwiChina Kufuneka senze ntoni ngokuchasene ne-COVID 19 Suppliers | Guanglei
Sonke siyazi ukuba abantu kwihlabathi liphela bazakufumana isitofu sokugonya i-COVID 19. Ngaba oko kuthetha ukuba sikhuselekile ngokwaneleyo kwixa elizayo? Ngokwenyani, akukho mntu unokuqinisekisa ukuba xa sinokusebenza kwaye siphume sikhululekile. Sisenokubona ukuba kukho ixesha elinzima phambi kwethu kwaye kufuneka siqaphele ukuzikhusela ngaphakathi nangaphandle.
Sifanele senze ntoni ngoku?
1. Fumana isitofu sokugonya se-COVID-19 ngokukhawuleza kangangoko kunokwenzeka ukuba kunokwenzeka. Ukucwangcisa i-COVID-19 yakho yokugonya, tyelela ababoneleli ngeyeza ngeenkonzo zokucwangciswa kwe-intanethi. Ukuba unemibuzo malunga nokucwangcisa ixesha lokugonya ukuqhagamshelana nomnikezeli wogonyo ngqo.
2. Nxiba imaski yobuso xa uphumile kwaye uyakugonywa. I-Covid-19 ayizukunyamalala ngexesha elifutshane, ukukhusela wena nosapho lwakho kakuhle, ukunxiba imaski yobuso xa uphumile uyimfuneko ngokwenyani.
3. Sebenzisa isicoci somoya ngaphakathi. Njengesimo sokuphefumla, i-COVID-19 ikwasasazeka ngamathontsi. Xa abantu bathimla okanye bekhohlela, bakhupha amathontsi olwelo emoyeni aqukethe amanzi, i-mucus, kunye neentsholongwane zentsholongwane. Abanye abantu ke baphefumlela kula mathontsi, kwaye intsholongwane iyabasulela. Umngcipheko uphezulu kwiindawo ezixineneyo ezindlini ezingenamoya ungaphantsi. Apha ngezantsi kukho isicoci somoya esithandwayo ngesihluzi seHEPA, i-anion kunye ne-UV sterilization
1) Ukucocwa kwe-HEPA ngokufanelekileyo kubamba amasuntswana anobungakanani (kunye nokuncinci kakhulu kunentsholongwane) ebangela i-COVID-19. Ngokusebenza ngokukuko kwee-micron eziyi-0.01 (i-nanometer ezili-10) nangaphezulu, izihluzi ze-HEPA, ucoca amasuntswana ngaphakathi kubungakanani be-0.01 micron (10 nanometers) nangaphezulu. Intsholongwane ebangela i-COVID -19 imalunga ne-0.125 micron (125 nanometers) ububanzi, ewela ngokuthe ngcembe ngaphakathi kubungakanani beesuntswana ezihluzwa zii-HEPA ngokusebenza ngokungaqhelekanga.
2) Ukusetyenziswa kwesihluzi se-ionizing kwisiCoci soMoya kunceda kuthintelo olusebenzayo lomkhuhlane osasazwayo.Ionizer ivelisa ii-ion ezimbi, inike amasuntswana omoya / amathontsi eerosol ahlawuliswe kakubi kwaye abatsale ngombane kwityala lokuqokelela. Esi sixhobo senza ukuba kubekho amathuba akhethekileyo okususa intsholongwane ngokukhawuleza kwaye ilula kwaye inikezela ngamathuba okuchonga kunye nokuthintela ukuhanjiswa kweentsholongwane emoyeni.
3) Ngokophando olwahlukeneyo, ukukhanya okubanzi kwe-UVC kubulala iintsholongwane kunye neebhaktiriya, kwaye ngoku kusetyenziswa ukuphelisa izixhobo zotyando. Uphando oluqhubekayo lukwabonisa ukuba i-UV irradiation inesakhono sokufunxa nokungasebenzi kwintsholongwane ye-SARS -COV kunye ne-H1N1 kunye nezinye iintlobo eziqhelekileyo zebhaktiriya kunye neentsholongwane.
Nawuphi na umdla ongaphezulu malunga nesicoci somoya, wamkelekile ukuba unxibelelane nathi ukuze ufumane iinkcukacha kunye nezaphulelo.
Ozone Air ocwenga Ekhaya Depot , UV Ekhaya Air ocwenga , Ekhaya Air engumcoci, Ngokuzenzekelayo Neutralizes Ekhaya Air ocwenga , Best Ekhaya Air ocwenga UK , Air engumcoci For Ekhaya Fumba, Zonke Products